Dilkii Khaashuqji: Hogaamiyaha Turkiga oo si toos ah u eedeeyay Dowladda Sucuudiga
Saturday November 03, 2018 - 10:59:32 in Wararka by saleban Cilmi
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horraysay waxaa uu dowladda Sucuudiga si toos ah ugu eedeeyay dilka weriye Jamaal Khaashuqji.
"Waxaannu ognahay in amarka lagu dilay Khaashuqji inuu ka soo baxay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Sucuudiga," waxa uu ku qoray maqaal ku soo baxay wargeyska the Washington Post.
Image captionSu'aalo ayaa ka taagan waxa ka dhex dhacay qunsuliyadda Sucuudiga 2-dii bishii Oktoobar
Maydkiisa ayaanan weli meelna lagu sheegin iyadoo Yasin Aktay oo lataliye u ah Madaxweyne Erdogan uu sheegay inuu rumaysan yahay in maydka ninkaasi lagu baabi'iyay aashito kaddib markii jirkiisa la jarjaray.
Waxa uu ka cowday in aanan wax tallaaba ah laga qaadin qunsulka guud ee Sucuudiga, kaas oo Turkiga isaga tagay, waxa uuna dacwad oogaha guud ee Sucuudiga ku eedeeyay inuu ku guuldarraystay inuu la shaqeeyo dambi baarayaasha "isagoon weliba ka jawaabin su'aalo iska fudud".
Daniel Balson oo ka tirsan hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegay in ay tahay in dowladda Sucuudiga loo qabsado dilka weriyaha.
"Muddo dheer ayey ku shaqeynayeen hab ah in iyaga aanan waxba laga qaadi karin xukunnadase ay dadka kale ku ridaan," ayuu yiri.
"Waxay aaminsan yihiin in qof dhaleeceeya dowladda lagu dhexwaayi karo dhismo diblumaasiyadeed misana dadka cadaaladda jecelna aanay arrintaasi ogaan doonin ama haddii ay ogaadaan inaysan ka hor imaana karin ama haddii ay ka hor imaadaan inaysan xasuusan karinba. Hagaag waannu ogaannay waanan ka xumaannay mana hilmaami doonno dilkaasi." ayuu yiri Daniel Baslson.